गर्भावस्थाको3हप्ता - संवेदन
प्रत्येक गर्भावस्थाले विभिन्न तरिकामा तिर्नु पर्छ: यो महिला आफैले हार्मोनल पछाडिको पृष्ठभूमिमा निर्भर गर्दछ, र भविष्यमा बच्चा आमाबाबुको यसको अनूठा संयोजन संग।
र यो सुन्दर समयको शुरुवात हरेक महिलाले आफ्नै तरिकामा पनि महसुस गर्दछ। केहि मात्र मासिक र धारीका परीक्षाको ढिलाइमा मात्र जान्दछन्, अरु असामान्य स्वाद प्राथमिकताहरू, भूखको हानि वा प्रारम्भिक toxicosis को शुरुवात गरीरहेका छन्। तर यो सबै, एक नियमको रूपमा, पछि हुन्छ। आउनुहोस् कि भविष्यको आमाको संवेदना गर्भावस्थाको तेस्रो हप्तामा के हो।
प्रारम्भिक गर्भावस्थामा संवेदन
सबैभन्दा पहिला, यो ध्यान दिनु पर्छ कि "गर्भवती" हप्ताहरु लाई रोकथाम शब्द को अनुसार विचार गरिनुपर्दछ जुन भ्रूण अवधि भन्दा 14 दिन लामो हुन्छ। यसको मतलब गर्नाले गर्भपतनको एक चोटीमा3देखि3हप्तामा संवेदना भन्दा धेरै फरक हुनेछ, गणनाको अन्तिम मेनुबाट।
त्यसोभए, हामी ती असामान्य संवेदनाहरू छलफल गर्नेछौं जुन आफूलाई ठीकसँग प्रकट हुन्छ कि गर्भवती 2-3 डाइवाइरी हप्ताको गर्भावस्थामा।
अक्सर, शब्द को शुरुवात मा गर्भवती आमाहरु पीएमएस जस्तै, धेरै सुखद लक्षणहरू छैनन्। यो कम पेट मा, दुखाइ वा चकलेट मा दुखाइ दुखाइ हुन सक्छ, हार्मोनल पृष्ठभूमि को पुनर्गठन को कारण मूड मा अक्सर तेज तीव्र परिवर्तन। प्रायः यस्ता सङ्केतहरूले मासुको दृष्टिकोणको प्रतीक बनाउँछ, तर यो अवस्थामा उनी गर्भवतीको पहिलो हर्बल हो।
प्रत्यारोपण ब्लिडिंग एक अनौठो खतरनाक निर्वहन हो जुन भ्रूण गर्भाशय को आंतरिक गुहा संग जोडिएको हुन्छ पछि हुन्छ। यो प्रक्रिया केवल गर्भवती हुने 3-4 हप्तामा हुन्छ, तर भविष्यको आमाको संवेदन फरक हुन सक्छ। ब्लिडिङ यति अज्ञात हुन सक्छ कि एक महिलाले यसलाई ध्यान दिदैन, विशेषगरि यदि गर्भावस्थाको योजना छैन।
प्रायः, गर्भावस्थामा पहिलो संवेदन स्तन ग्रंथिहरूमा परिवर्तन हुन्छ। तिनीहरू सुत्छन्, निप्पलहरू अधिक संवेदनशील हुन्छन्, स्तनले हल्का स्पर्शको साथ पनि छोटो हुन सक्छ। कारण यो हो कि सबै हर्मोन - प्रोजेस्टरोन, एस्ट्रोजन र निश्चित रूप बाट कोरियोनिक गोंडोट्रोपिन, जसको स्तर छिटो बढ्दै गएको छ।
याद गर्नुहोस् कि माथिको सेन्सरहरू महिला निकाय र हरेक चलिरहेको गर्भावस्थाको एक विशेषता हो। तिनीहरू, एक साथ प्रकट रूपमा, र सबै अनुपस्थित गर्न सक्छन्, र यो सबै एक आदर्श हुनेछ।
जब तपाईं प्रारम्भिक चरणहरूमा गर्भवती हुनुहुन्छ यो तपाइँलाई बिरामी बनाउनुहुन्छ?
बच्चाहरु लाई जन्मदिन को तेज कसरि करे?
गर्भावस्था 15 हप्ता - भ्रूण को विकास
गर्भावस्थाको 8 हप्ता - के हुन्छ?
क्या एक अक्टोपिक गर्भावस्था मा मासिक हो?
गैर विकासशील गर्भावस्था
कलकोस्टम कहिले देखा पर्छ?
रेनी गर्भावस्था मा
गर्भावस्थाको सुरुवातमा पपावरिनका मोमबत्तीहरू
गर्भावस्थाको समयमा Pinosol
गर्भावस्थाको बेला कसरी घबराउनु हुँदैन?
मकईको आटाबाट Tortillas
तनावसँग कसरी व्यवहार गर्ने?
जेमी डर्नान दोस्रो पटकको पिता बने
रङबाट अलग रह्यो
महिला सूट 2016
ब्ल्याकबेरी कहाँ बढ्छ?
परिवारको जीवनको संकट
बर्डक - आर्थोरोसिस को लागि औषधीय गुण
बेनेडिक्ट कम्बरब्याच र केइरा नाइटली
पोशाक आभूषण Florancing
एप्पल राती - राम्रो वा खराब?
बच्चाहरु मा टन्सिलाइटिस कसरि व्यवहार गर्ने?
घरमा कैंचीलाई कसरी खुल्ला पार्नु हुन्छ?
फोटो शूटको लागि छविहरू
रिसेप्बल योग्य अंडरवियर डिलीवरी पछि
ब्राउन चावल राम्रो छ
कजाखस्तान मा दूतावास को दक्षिण अफ्रिका
चिकन ओवन - स्वादिष्ट र मौलिक छुट्टी छुट्टी व्यंजनहरूमा स्याउसँग भरिएको
कुन रूखहरू साइटमा रोप्छन्?
मानिसहरु मा सौर plexus
3 महिनामा बच्चाको दिनको शासन
स्टाइलिश छोटो बालबालिका 2015